SharePoint နှင့်အတူ Microsoft က Office ကို 365: အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ် | ယင်း
SharePoint နှင့်အတူ Microsoft က Office ကို 365: အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်
Microsoft က Office ကို 365 နှင့် SharePoint
အဆိုပါ Connection ကို Making
Microsoft က Office ကို ရုံအစီအစဉ်ရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကူညီမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏အဓိကနှင့်ရုံး 365 ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုရှိပါတယ်။ မိုဃ်းတိမ်ကိုလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Skyhigh ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေး client ကိုတာလီချိုးခြင်းဖြင့်အများဆုံးအမြင်ကျယ်အသုံးပြုသွားမည် cloud-based ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတူရိယာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေတွင်းတစ်တွင်းလူသိများယန္တရား၏အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက်တစ်ခုမှာကြောင့်စည်းကမ်းထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်အခြားအထောကျအကူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ကိုသြဒိနိတ်အဖြစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
As Office ကို 365 တဖြည်းဖြည်းစံဖြစ်ထွက်လှည့်, ဒါ SharePoint, Microsoft ရဲ့ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတူရိယာပါဘူး။ SharePoint အသုံးချဖို့, အုပ်စုများ updates များကိုလက်လှမ်းတဖြည်းဖြည်းနှင့်အတူ, အလားတူအကျိုးတူအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းအစားအဆိုပါရှေ့ဆက်နောက်သို့ဆုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစာရွက်စာတမ်းများ၏နှောင့်ရှက်ကြုံနေရထက်အထူးကုတစ်နေရာတည်းသို့လက်မှတ်ထိုးစီစာရွက်စာတမ်း၏လတ်တလောတစ်အုပ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ပါသည်။
တကယ်ရဖို့ဖြစ်စေရန်, က may သကဲ့သို့, နှစ်ခုအစီအစဉ်များ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ interface ်၏တစ်ခုစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအိမ်ထောင်မှာကြံရာပါနှင့်ဆင်တူကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတွင်အိုင်တီအသုံးချဖို့စဉ်းစားသင့်၏ geniuses အရာစုံတွဲတစ်တွဲများမှာ Microsoft က Office ကို 365 နှင့် SharePoint အလားတူဒိုမိန်းအတွက်သူတို့ကိုရှိခြင်းအတူတူလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။
ဒီစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောပြည်ထောင်စုအလုပ်လုပ်စေရန်, ရုံး 365 မှ SharePoint ချိတ်ဆက် SharePoint Server ကိုအတွက်ရုံးအမိန့်ပေးဖို့ Connect ကိုမှတဆင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာသငျသညျ, ပါဝင်သည်ကြီးကြပ်ခြင်း, ဆော့ဝဲနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း့အနည်းငယ်အပိုင်းအစ - ဆိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်ခုအဆင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတော်လေးမကြာသေးမီကအထူးညဥ့်သည်။ သင့်ရဲ့အုပ်စုသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုသစ်ကိုစုံတွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်အချိန်စီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
SharePoint မှတဆင့်လက်စသတ်နိုင်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်ထွက်ရှာဖွေသို့ရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသူကိုအမြင်ပေးထားသောစီ SharePoint စုရုံးဖို့အခွင့်အရေးကိုပြောင်းလဲပစ်ရမည့််၏နှင့်မည်ကဲ့သို့သောသူတို့ကိုအခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးတိုးရဝုဏ်အပေါ်ကြီးကြပ်လိမ့်မည်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပျသမားအရေးကွီးတဲ့အဆင်ပြေလမ်းအတွက်လုပ်ရမည်နှင့်အညီခွင့်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်နည်းစနစ်များနှင့်စနစ်အားတည်ဆောက်ခြင်း, နောက်ကျောနှင့်ထွက်သွားသည်။
ပွင့်လင်းစာပေးစာယူတဲ့လျောက်ပတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအလုပ်စေသည်နှင့် SharePoint ကရုံး 365 နှင့်၎င်း၏အဆုံး clients များနှင့်အတူပြောသောသူတို့လမ်းဖြင့်အလွန်ပွင့်လင်းဖြစ်ကိုဘယ်လိုထုတ်ကိန်းဂဏန်းများ။ Microsoft က၎င်း၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြသသည့်အတိုင်း SharePoint သူတို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဌန်ကျော်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်ဝဘ်အစီအစဉ်မှတဆင့်အဆုံး client ကိုမှပုံပေါ်ပါတယ်။ clients, စာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေ OneDrive ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်း, အခြားသူများနှင့် တွဲဖက်. အလုပ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အုပ်စုများမှရှိပြီးသားဖိုင်တွေဖြစ်စေဝေငှနိုင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းပြီးတာနဲ့, စာရွက်စာတမ်းများ SharePoint အတွင်းပိုင်းကနေတပြင်လုံးကိုအသင်းအဖွဲ့မှ imparted နိုင်ပါသည်။ အခြေခံ interface ကိုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စုကရိုးရှင်းစေသည်နှင့်မည်သည့်ကို web program ကိုကနေတဆင့်မစိုက်ပွင့်လင်းစေသည်။
SharePoint, တစ်အုပ်ဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့တူပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတူရိယာများ၏မြင့်တက်မတိုင်မီကမကောင်းတဲ့အိပ်မက်ခဲ့တယ် - အဆုံး client များအတွက်သညျး။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဟာ Microsoft Word သို့မဟုတ် Excel ကိုတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းလုပ်နဲ့အီးမေးလ်ကနေတဆင့်စေလွှတ်သောအခါအဲဒီအချိန်တုန်းကသည်, အကျိုးခံစားရုံ reexamined လိုက်လျောညီထွေစောငျ့ရှောကျနိုငျတယျ။ စာရွက်စာတမ်းပြောင်းလဲမတိုင်မီ Track အပြောင်းအလဲများအသုံးပြုသွားမည်အကျိုးခံစားဘဲနေလျှင်, အုပ်စုတစ်စုအပြောင်းအလဲများကို switched ပြီလျှင်ပြန်ချေဖျက်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
သို့ရာတွင်ယနေ့ Microsoft က SharePoint ရုံပုံစံအမျိုးမျိုးကနေအစပြုသောအမှားများနှင့်အတူယွင်းဘော်မဟုတ်ပေမယ့်အလားတူအရပျ၌လူတိုင်းရဲ့အလုပ်လုပ်စဉ်ကတည်းကပါကထိုနည်းတူတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း၏အတိတ်မျိုးကွဲလေ့လာမှ clients များဖွတစ်ခုတစ်အုပ်ဖြစ်သမိုင်းထည့်သွင်းသောထူးမြတ်သော။
လက်လှမ်းကွဲပြားခြားနားသော apparatuses ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း Microsoft က PowerPoint အဖြစ်သေးနိဒါနျးများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခုအသစ်နားချင်းဆက်မှီသဖြင့်, သင်တို့သည်နောက်တဖန်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှတင်ပြအလားတူအာကာသအတွင်းဖြစ်ရပါမည်။ SharePoint အသုံးချဖို့, သင်သာစုံတွဲတစ်တွဲကလစ်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းရန်သင့် PowerPoint နိဒါနျးဖြစ်စေဝေငှနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်သင်သည်ဗီဒီယိုချတ်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာနှင့် တွဲဖက်. ကအသုံးချဖို့ပါတယ်ရှိမရှိ, ဤကိုက်ညီခြင်းသင်ကအချိန်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမနှမြောကူညီပေးပါမည်။
အကောင်းဆုံးကို relational သမဂ္ဂများမှာကြံရာပါတစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြုပြင်လိုသောအလုပ်လုပ်ကြသည်။ SharePoint ပျေါလှငျစေ ins ပါဝင်သည် Microsoft က Office ကို ပိုပြီး utilitarian ပစ္စည်းများနှင့်မှတ်တမ်းများ။ အများဆုံးထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြားတစ်ဦးက standout စာချုပ်များ, အကြံပြုချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစာရွက်စာတမ်းများမှ marking စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့် DocuSign ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်း၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးအတှငျးရှိဆက်ဆံနေသည်ကတည်းက SharePointကျွမ်းကျင်သူများကလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများ following.Microsoft လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အရာခပ်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း, ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသိသိသာသာလျော့နည်းခက်ခဲစေနိုင်သည်
Microsoft က Office ကို 365 လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ဖို့ကလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများအောင်, မိုဃ်းတိမ်မှအများဆုံးလူသိများတဲ့ရုံး software ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အခါအမှတ်မှာ Office ကို 365 အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်ဦးလမ်းပိုင်းအဖွဲ့သည်တက်တာခြင်းမရှိဘဲလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနိုင်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်စေပြင်မိတ်ဖက်ဖို့ဖြစ်စေဝေငှနိုင်ပါသည်, SharePoint နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်လူတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလျင်မြန်စွာစကေးကူညီပေးနေလုံးကိုပိုပြီးလျော့နည်းပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကထိရောက်မှုရှိတိုးချဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအကောင်းကောင်းသိသည် Microsoft ပစ္စည်းမှအကျိုးမှမျှော်လင့်ထားတဲ့စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်, သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအလုပ်လုပ်ဖို့အထူးပြုစွမ်းရည်နှင့်သင်ယူမှုများအာမခံချက်မှယူနိုင်ပါတယ်တချို့အထူးသဖြင့်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ Microsoft က Office ကို 365 နှင့် SharePoint အသုံးချဖို့အတွက်တတ်လွယ်ခြင်းကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ထားသူအချို့အဘို့, ကနဦးခြေလှမ်းမှန်မှန်များဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ် Microsoft က MCSA: ရုံး 365 လက်မှတ်.
သငျသညျ aced င့်ပြီးတာနဲ့ Office ကို 365ယင်းနှင့်အတူအောက်ပါအဆင့်အထိ Microsoft ကနှင့်သင်၏အသင်းအဖွဲ့ဆောင်ကြဉ်း MCSE: SharePoint ကျော်လွှားရန် Productivity ။